'साधन श्रोत हामीसंगै छ, कमिशन चाहिने भए त्रिशुलीमा हाम फाल' |
मेघराज नेपाली 22 August, 2016
खुबै चर्चामा आउने दुई राष्ट्रिय गौरवका योजना हुन 'काठमाडौँ निजगढ फास्टट्रयाक र माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत आयोजना'। नेपालको भविष्यसँग गासिएका यस्ता अरु थुप्रै आयोजनाहरु छन्। नेपाल सरकारले खास गरेर भारतका दलालहरुले भन्ने गरेका कुरा के हुन भन्दा हामीसँग साधन श्रोत छैन त्यसैले हामीले भारतलाई यस्ता योजना दिनु पर्छ। बिचरा गाउका अशिक्षित जनता लाई के थाहा? होलातानी भनेर बस्छन। बिगत चार बर्षदेखी बन्द भएको काठमाडौँ दुबइ सिधा उडान फेरी संचालनमा आएको छ। एकजना यात्रीले यस्तो बिमान किन्न कती पैसा लाग्ला नि भनेर बिमान चालक बिजय लामा लाई सोध्नु भएको खबर बाहिर आयो। लामा अक्क न बक्क भएर प्रती प्रश्न गर्दा यात्रीले भन्नु भयो 'हामी दुबइमा बस्ने नेपाली ५ लाख छौ हामीले यस्तै बिमान नेपाल सरकार लाई किनी दिन्छौ। तपाईंहरुले दैनिकी २ पटक दुबइ काठमाडौँ उडान गर्ने सर्त मान्नु पर्‍यो।' यो नेपालीहरुको भावनालाई सलाम गर्न मन लाग्यो। भलै हामी कुल्ली मजदुर हौला तर हाम्रो स्वाभिमान राम्रो राष्ट्रप्रति माया धेरै माथि छ त्यसैले जनता को यो मतलाई अबमुल्यन गर्ने नामर्द दलालहरु हो चेत खुलाउ ।
राष्ट्र निर्माणमा बिदेशिएका युवालाई आह्वान गर त तिमीले सोचेको भन्दा शत प्रतिशत लगानी नेपालीले लगाउन तयार छन् । थोपा थोपाबाट घैटा भरिन्छ। हामी एक्लैले केही गर्न सक्दैनौ तर सबै मिलेर सानो सानो रकम बाट ठुला ठुला योजना बनाउन सक्छौ यो सुनौलो मौकालाई सदुपयोग गर। जनतालाई यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर नफुटाउ नजुधाउ। नेपाली जनता नेपाली आत्मसम्मान अभिमान गौरव कहिलै मर्दैन मर्न दिनु हुँदैन। राष्ट्रिय गौरवका योजना हामीले आँफै बनाउनु पर्छ। साधन श्रोतको चिन्ता नलिदा हुन्छ बरु कमिसन नआएको चिन्ता लागेको हो भने त्रिशुलीमा हाम फाले हुन्छ।
अधिकतम नेपालीले मजदुर गरेर बसेका मलेसिया साउदी कतार जस्ता देशका नेपालीहरुकालागि आफ्नै देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक बिमानमा यात्रा गर्न पाउदाको खुसीको मूल्य छैन । युवा अवस्था सकिएपछि थोत्रो शरीर लिएर घर फर्किने हो भोली मुखमा माड के ले हाल्ने हो भन्ने चिन्ता सबैलाई छ। यही कारणले पनि नेपालको लागि लगानी गर्न तयार छन नेपालीहरु बरु केही शेयर बाट आएको आम्दानीले बुढापा सजिलै बित्ने योजना बनाउ।
लगानी नभएर हामी गरीब भएका होइनौ। शाशक बर्ग बिस्तारवादिको दलाल भएर गरीब भएका हौ हेपिएका छौ कुटिएका छौ लुटिएका छौ। ६०लाख नेपाली बिदेशमा बस्छन भारत बाहेकका मुलुकहरुमा उनीहरुको आफ्नो देशप्रति अथाह माया छ। जसको कारण आफ्नो देश बनाउन भौतिक रुपमा सम्भव नभए पनि आर्थिक लगानी गर्न सके भने ठुला ठुला योजना बन्ने निश्चित छ। जापानमा कोरियामा अस्ट्रेलियामा कती नेपाली बस्छन बेलायतमा कती नेपाली छन? सबैले नेपालमा लगानी गर्न तयार छन् ।
राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता भयो भने त्यो तिमीहरुको आखिरी दिन हुन सक्छ खबर्दार शाशक बर्ग हरु हो।त्यसैले हाम सँग श्रोत छैन भन्नेर जनता लाई नडराउ नढाट तिमीहरुले भारतको चाकडी गर्न छोड। देश बनाउन जनता आँफै तयार छन। दलाली गरेर यो देश लाई बिदेशिको रणभुमि बनाउनु भन्दा घाटिमा पासो लगाएर मर्दा हुन्छ।
यस भन्दा अगाडी नेपाली सेनामा आकर्षक जागिरको अ...
नेप्सेमा ४० अंकको गिरावट, किन्...
नेपाल र श्रीलंकाबीच सिँधा हवाई सम्पर्क सुरु गर्दै हिमालयन एयरलाइन्स, यस्तो छ भाडादर अहिलेसम्म ट्रान्जिट बनाएर आवतजावत गर्नु पर्ने नेपाल र श्रीलंकाबीचमा सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना हुने भएको छ। तिब्बत एयरलाइन्सको लगानी समेत रहेको हिम...
बाँकी सर्वोच्चलेको फैसलापछि हाईसञ्चो मानेर बस्नु हुन्न, लोकमानलाई संसदबाटै महाभियोग लगाउनुपर्छ : गुरुङ नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद धनराज गुरुङ्ले लोकमानलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरेपनि यसलाई यतिकैमा हाईसञ्चो मानेर बस्न नहुने भन्दै लोकमानलाई संसदबाटै म...